ကမ္ဘာနှင့်အမှီရင်ဘောင်တန်း၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အွန်လိုင်းမှ စာပေလေ့လာလိုက်စားနိုင်သည့် စာမျက်နှာသစ် အဖြစ် ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန်အတွက် Learning Platform တစ်ခု တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းတွင် တက်ကြွစွာ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်နေသည့်အဖွဲ့အစည်းနှင့် လက်တွဲလုပ်ကိုင်လိုပါသလား? ကျွန်တော်တို့၏ Myan U တွင် နယ်ပယ် ပေါင်းစုံမှ စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားသူများအား လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။ မည်သည့်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှမဆို စေတနာကို အရင်းတည်ပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် လုပ်ကိုင်လိုသူများအား ကြိုဆိုနေပါသည်။
အော်ဖော်ပြပါ ရာထူးလစ်လပ်နေရာများအတွက် စိတ်ပါဝင်စားသူများသည် မိမိတို့၏ ကိုယ်ရေးအကျဉ်းနှင့် မျှော်မှန်းလစာတို့အား ရေးသား၍ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဌာန ([email protected]) ထံသို့ ပေးပို့ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
Operation Executive for Online Learning Education (Full Vancancy)
The Operation Executive has day-to-day responsibility for the smooth and effective running of online product projects withafocus on great delivery. These are the main areas of focus for an operation executive:
Take part in the work flow of the project from start to end
Be assist the project teams and coordinating the project, all matters related to project content
Regular liaison with the project team members on project-related matters
Work with internal teams to help define project scope and content, resource requirements and cost estimates for projects
Taking responsibility for the effective flow of information between team members and other related stakeholders in project activities
Ensuring the effective preparation and delivery of project Internal and External meetings, and production of all necessary documentation
Reporting on project progress to Chief Technology Officer
Be the hub of communication for the project – in regular contact with internal and external partners engaged in delivering our product.
Work with client’s third party agencies and content providers to jointly define scope, manage and deliver campaigns when appropriate.
Understand the technical aspects of the learning development process if possible